Umhle! Iingcamango ezi-17 ze-Afrika eziphefumlelweyo zokuhombisa ikhaya ngo-2020 nangaphaya
Ukuphefumla okuhonjisiweyo: Iindawo ezili-17 eziQhelekileyo zase-Afrika eziphefumlelweyo zokuphila onokuzibona
HUkhe wabona ukuba uninzi lwezikhuthazo zohlobiso lwangaphakathi ezibonakala kwihlabathi liphela zivela njani kwimimandla emibini? Ngandlela-thile, iingqondo zethu kunye nokubona kulungelelaniselwe ukugxila kwimihombiso ephefumlelweyo yasentshona evela kwimvelaphi eyahlukeneyo yamazwe aseYurophu kunye neMpuma ukufumana "okungaqhelekanga" kunye neenkcukacha zokugcina ulwazi. Embindini wento yokuma imihlobiso yangaphakathi, ubuhle obuyimbalasane ephefumlelweyo yaseAfrika butyalwa kakhulu. Iingcamango zokuhombisa ekhaya eziphefumlelweyo zase-2020.
Ngelixa isenokungabi lukhetho oluqondakalayo, oko kuthetha ukuba abantu badla ngokufika kwiindawo zangaphakathi zase-Afrika ngokudibeneyo kakhulu kunokuba kufanelekile; kanti umhombiso wangaphakathi ophefumlelweyo wase-Afrika yenye yezona zinto zinokudala kwaye zisebenzise iindlela zesitayile sokuhlala kunye nangaphaya. Iingcamango zokuhombisa ekhaya eziphefumlelweyo zase-2020.
Izinto zangaphakathi eziphefumlelweyo zase-Afrika zilingisa ubume bendalo yase-Afrika, izakhiwo zase-Afrika, inkcubeko, ukutshona kwelanga, impilo yasendle kunye neminye imiba yokuphila yaseAfrika. Kananjalo, amagumbi okuhlala anama-Afrika anezinto ezifudumeleyo ezinxulumene nendlela yokuphila yaseAfrika. Kwabaninzi bethu ukubona igumbi lokuhlala elinemigca yase-Afrika kufana nokungena kwi-savannah e-utopic. Izixhobo ezizaliswe yimbali kunye neetoni zomhlaba ezinobutyebi konke kongeza kubuhle obuhonjiswe ngaphakathi kwi-Afrika. Kwimibono yokuhombisa ekhaya.
Ukuya kwigumbi lokuhlala elihlotshiswe ngama-Afrika konke malunga nokunxibelelana nendalo kunye nenkcubeko yamaAfrika kunye nobuhle bawo obuluhlaza. Ngokungafaniyo neminye imixholo emininzi, ukuzama ukongeza incasa yase-Afrika kwigumbi ngaphandle kokusebenzisa izinto eziphilayo nezizinzileyo ngokulandelayo akunakwenzeka; Enjani yona indlela yokumema indalo, inkcubeko kunye nembali kwikhaya lakho.
Nanga amagumbi okuhlala aphefumlelweyo ase-Afrika angama-5 ukukukhuthaza…
1. Amagqabantshintshi alula kwaye abaxabisayo eAfrika
Iinkuni kwiindlela zalo ezahlukeneyo ngummiselo obalulekileyo weskimu yoyilo lwaseAfrika. Unokhetho oluninzi apha ngomsedare, i-ebony, okanye i-mahogany yaseAfrika phakathi kwezinye iintlobo ezininzi ezithandwayo zeenkuni. Ukuba ukhetha ukubonakala okumnyama okugcweleyo e-Afrika, ke ubugcisa obufakelweyo njengobugcisa obutyhidiweyo njengoko kubonwe ngasentla, kunye nodongwe luphinde lube yindlela elula yokubonakalisa umxholo ukwimo yawo. Iingcamango zokuhombisa ekhaya eziphefumlelweyo zase-2020.
2. Ukuchukumiseka kwezilwanyana zasendle zaseAfrika
Ukuphosa iragi kumbho ngeprints zezilwanyana kunye nomcamelo wokuphosa okanye ezimbini akuthethi ukuba usamkele isimbo saseAfrika. Ukuba kukho nantoni na, ukongezwa okunjalo kuhlala kubonakala ekhaya ngendlela eqaqambileyo ngasentshona. Endaweni yoko ungangenisa i-vibe yokwenyani yase-Afrika ngendlela eethe-ethe kodwa engathinteleki ngokubeka imizobo yezilwanyana zasendle zaseAfrika kunye nobugcisa obuhonjisiweyo kwitafile yekofu.
3. Umxholo kunye nohlaziyayo ongumxholo wetrophiki
Enye indlela enobulumko yokungenisa i-motifs zase-Afrika ngaphandle kokuba icace gca kukukhetha umxholo oqabulayo weTropiki. Ngaphandle kokuba lukhetho olufudumele ngokumangalisayo, oku kukwavumela ukuba udibanise umhombiso kunye nezixhobo ezivela kwezinye iinkcubeko kunye nezinto ezifunyanwa ngamaAfrika. Nantsi imifanekiso yenkcubeko yabafazi baseAfrika, izitulo zokhuni, kunye Ankara ukulahla umqamelo usebenza kakhulu ngomlingo, kudityaniswa nezinye iziqwenga ze-eclectic ezifana netafile kunye neetafile zeziko. Kwimibono yokuhombisa ekhaya.
4. Iitoni zomhlaba omdaka
Abanye abantu bayayithanda indlela yokubeka ngasemva, indlela encinci yokuhlobisa ngaphakathi. Nokuba awunethamsanqa ngokwaneleyo ukuba ungabanazo naziphi na izinto zakudala zase-Afrika okanye amalaphu, usenokuzisa ikhaya kancinci i-aura emangalisayo yelizwekazi ngokukhetha imibala efanelekileyo.
Akukho nto ithi i-Afrika njengokumema, amathoni omhlaba afudumeleyo-cinga izithunzi ezi-brown kunye ne-orenji. Phosa abanye abalandeli be-raffia eludongeni ukuze ufumane i-glibe ekhazimlayo yobuhlanga. Kodwa qinisekisa ukuba endaweni yokujonga okuvaliweyo, ukugqitywa kukuchukunyiswa kwerisithi kwaye iluhlaza.
5. Iindidi zeendwangu zeendwangu eziphakamileyo
Ukuba unethuba lokwakha okanye ukuhlengahlengisa i-upholstery yakho, khetha iiprinta zelizwe laseAfrika ngemibala eqaqambisa ingaphakathi lakho. Abantu baseAfrika benza iipateni ezizodwa ezithi nganye ibambe intsingiselo eyahlukileyo. Ke, yiza nesiqwenga senkcubeko yase-Afrika kunye nembali ekhayeni lakho kwaye ubeke ifoto enkulu kamama okanye yomakhulu wakho ukuze uzive uyisityebi kwaye ungaphelelwa lixesha. Ukuhonjiswa kwamakhaya aphefumlelweyo e-2020.
Bona iindawo zokuhlala eziphefumlelweyo zase-Afrika…
@ne_yokwakha Kwimibono yokuhombisa ekhaya.
@olga_modjaro Iingcamango zokuhombisa ekhaya eziphefumlelweyo zase-2020.
African ephefumlelweyo yase-african umhombiso ophefumlelweyo wase-african iiprinta zezilwanyana Amakhaya umhlobiso wangaphakathi ukulungiswa ngaphakathi imizobo kululeka iinkuni
UCollins Badewa Julayi 6, 2020